Ka hel saxnaanta mitirka mitirka 'iPad / iPhone'
Qalabka GPS-ka ee qalabka iOS, sida iPad ama iPhone, wuxuu ku helayaa saxnaanta nidaamka bog furaha kale: inta u dhexeysa 2 iyo 3 mitir. Marka laga reebo GIS Kit, waxaan aragnay fursado kale oo yar oo aan ku hagaajin karno saxnimadeeda, hase yeeshe mahadnaqa la-tashiga saaxiib, waxaan u aragnaa mid xiiso leh inaan eegno tan ...
SuperGeo galo isbahaysiga la GPS PL in ay bixiyaan xal macasha macruufka
SuperGeo Technologies, ayaa ku dhawaaqday wada shaqeyn xiiso leh oo la leh GPS PL, oo ​​ah nashqad shaqo oo soo jiidaneysa dareenka isla markaana ay maalin walba kor u qaadayaan shirkadaha halkii ay ku tartami lahaayeen suuqyada, sameysmaan isdhexgal iyagoo raadinaya khibrad ka wanaagsan kuwa isticmaala. Labada shirkadood waxay bixiyaan xalka GIS ee aaladaha mobilada, sababtuna tahay ...
GPS / Qalabka, SuperGIS
Waxa la sameeyo haddii iPad la xado
Wiil, mawduuca waa muuqan karaa, laakiin goor dhow ama goor dambe waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa la sameeyo marka iPad la xado. In kasta oo dhinacyada qaarkood ay khuseeyaan iPhone, iPod Touch iyo iMac, haddana waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto u habeynta iyada oo la sharfayo wixii aan mar ku bartay halkaas: 1. Ka fogow inta ugu macquulsan ...
GIS Pro Codsiga ugu fiican ee GIS ee iPad-ka?
Toddobaadkii hore waxaan la hadlay saaxiibkey reer Kanada ah oo ii sheegay waxa ku saabsan khibrada ay u leeyihiin isticmaalka GIS Pro ee hababka sahaminta cadastral. Waxaan ku dhowaanay gabagabada in inkasta oo ay jiraan qalab kale, laga bilaabo waxa ku jira App Store tani waa hadaanay ugu fiicnayn macruufka, the ...
Akhriska codsiyada kor ku xusan waxay shaki la'aan beddelayaan habka aan ugu raaxeysano buugaagta. Gaar ahaan, waxaan had iyo jeer jeclaa inaan ku dhadhammo muujinta iyo qoraallada buug dhab ah, joojinta iyo akhriska tartiib-tartiib ah si aan ugu dhawaaqo tiraabta wanaagsan. Laakiin waligay iguma dhicin in safar socdaalku noqon karo ...
Arrinta Google Chrome waa tusaale layaab leh oo la yiri 4 sano ka hor: "Browser-ka oo ku haminaya inuu noqdo nidaam hawlgal" Waxaan xasuustaa bishii Sebtember 2008 waxaan wax ka qoray sida Google ay u billowday bog furaha internet-ka, markii la filayay in internetka laga leexiyo. Raadiyaha wuxuu umuuqdaa mid waalan sida looga fikiro hadda
Baridda CAD / GIS, Geospatial - GIS
Nidaamka Meeleynta Caalamiga ah oo ah mashruuc carwo saynis ah
Carwadii sayniska ee wiilkaygu way soo noqotay, ka dib dhawr doodood oo aan la yeeshay macallinka oo ku saabsan suurtagalnimada mashruuca, waxay ugu dambayntii ansixiyeen mid ka mid ah oo uu ku booday ku dhowaad mitir farxad ... anigu labadoodaba waan ku dhowaaday maxaa yeelay waa mowduuc aan aad u jecel nahay labadaba. Sidoo kale maadaama mashruucani asal yahay, ayaanu go'aansanay ...
Hadday wax wanaagsan ka jiraan taariikhdan ... waxay la jirtaa qoyska. ... ka soo bood boodka ... laga bilaabo iPad-ka ... ujeedka ugu fiican
Woopra ayaa halkan u ah iPad-ka
Woopra waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee lagula soconayo taraafikada goobta tooska ah. Muddo ka hor waxaan dib u eegis ku sameeyay arjiga desktop-ka, intaa waxaa sii dheer waxaa jira nooc loogu talagalay Google Chrome oo hadda oo hadda la cusbooneysiiyay nooca horay u jiray ee iPhone-ka, iyadoo loo marayo qaab caalami ah oo cajaa'ib leh 2.0 oo la jaan qaadi kara ...
Miyaynu haysannaa Microstation-ka Mac?
Dhowr sano ka hor AutoDesk ayaa naga yaabisay markii ay ku soo noqotay Mac; In kasta oo aysan weli ahayn nooc gebi ahaanba is barbar socda oo waxqabadka qaarkood la la'yahay, waxaan fahamsanahay isbeddel muuqda oo ku aaddan waax la yaqaan in muddo ah sida xulashada. In Bentley uu ku laabto Mac waxay ahayd rajo in sanadihii u dambeeyay soo muuqanayay. ...